Nyika dzine urombo dzinoramba mishonga yemahara yeCOVID-19 inopihwa neUN
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Nyika dzine urombo dzinoramba mishonga yemahara yeCOVID-19 inopihwa neUN
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Nyika dzine hurombo dzine nyaya dzakati wandei dzekubvuma majekiseni akapihwa kwadziri. Vazhinji vanoshaya simba rekuchengetera kuti vagamuchire zvinhu uye vane matambudziko nekuburitsa mishandirapamwe yekudzivirira nekuda kwezvinhu zvakaita sekusagadzikana kwemumba uye kusagadzikana kwehutano hwehutano.
Etleva Kadilli, mukuru weSupply Division yeUNICEF, sangano reUnited Nations rinoona nezvekuvandudza hupenyu hwevana pasi rose, vakaudza Paramende yeEurope kuti chirongwa cheCOVAX, chakagadzirirwa kubatsira nyika dzine hurombo kubayisa vanhu vadzo kurwisa coronavirus, iri mudambudziko, sezvo mipiro mizhinji yekudzivirira iine hupenyu hwesherufu hwasara hupfupi kuti hugoverwe nemazvo.
Mwedzi wapfuura chete, anopfuura mamirioni zana emadhora akapihwa kune UNChirongwa cheCOVAX chaifanira kurambwa nevanowana rubatsiro, vazhinji vacho nekuda kwemazuva ekupera kwenguva kwemishonga.
Sangano iri gare gare muzuva rakati mamwe mamirioni gumi nemashanu nemazana mashanu emadhora akarambwa mwedzi wapera anonzi akaparadzwa. Zvimwe zvekutumira zvakarambwa nenyika dzakawanda.
Asi mazuva mapfupi ekupera kwemishonga yakapihwa kuchirongwa chekugovana zvakare idambudziko guru, Kadilli akaudza. EU vamiriri vemitemo.
"Kusvikira tave nehupenyu huri nani, izvi zvichange zvichinetsa nyika, kunyanya kana nyika dzichida kusvika kune vanhu munzvimbo dzinonetsa kusvika," akadaro.
COVAX parizvino yave kusvika pakuunza bhiriyoni yayo dosi, manejimendi ayo akashuma. The EU inoverengera chikamu chimwe muzvitatu chemadhora akaunzwa kwairi kusvika zvino, Kadilli akadaro.
The World Health Organization (WHO), iyo inobata pamwe neCOVAX, yakaramba ichitsanangura kushayikwa kwerubatsiro kwayakawana kubva kune vanopa pakati pekuchengetedzwa kwejekiseni nenyika dzakapfuma sekutadza hunhu.
Dzimwe nyika makumi mapfumbamwe nembiri dzakapotsa chinangwa chekudzivirira cheWHO chemakumi mana muzana muna 92 "nekuda kwemusanganiswa wekushomeka kunoenda kunyika dzine mari shoma kwenguva zhinji yegore uyezve majekiseni anotevera achisvika pedyo nekupera uye asina zvikamu zvakakosha - semajekiseni," WHO Director-General Tedros Ghebreyesus vakadaro pamusangano wekupera kwegore muna Zvita.
Vamwe vatsoropodzi vanoti chirongwa ichi chaive chakakanganisika kubva pakutanga nekuti chinovimba nerupo rwevapfumi pachinzvimbo chekukurudzira kuwanikwa kwejekiseni kumarudzi ari kusimukira kuburikidza nekubviswa kwezvipingaidzo zviri pamutemo sekuchengetedzwa kwepatent. Billionaire Bill Gates, anove munhu ane simba muhutano hwepasirese, anga ari mupikisi wekubvisa zvidziviriro zvemishonga patent, kunyangwe hwaro hwake hwaiita senge huchipopotera paCCIDID-19 vaccine mushure mekushoropodzwa pachinzvimbo.
Ndira 14, 2022 pa23: 57
Bayiwa nhomba zvakadaro. Zvakakunakira